निषेधाज्ञा २.० तनाव : "अहिले जे भैराखेको छ, त्यहि सत्य हो! स्वीकार गर्नुस्" | GNN Nepal GNN Nepal निषेधाज्ञा २.० तनाव : "अहिले जे भैराखेको छ, त्यहि सत्य हो! स्वीकार गर्नुस्" | GNN Nepal
वैशाख १७ गते, २०७८ १४:३९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । हामी कोरोनासंग लड्न सुरु गरेको एक वर्ष भन्दा बढी समय भैसकेको छ । यो बिचमा विश्वभरका मानिसहरूले धेरै कठिनाइहरू देखेका छन् । उत्तिकै कठिनाइहरूको सामना पनि गरेका छन् । जसको कारण मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि असर परिरहेको छ। विशेषगरि नेपालजस्तो देश कोरोना महामारी र त्यसले पराइरहेको असर कराडौंका लागी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
पहिलो चरणको ४ महिने भन्दा बढी लामो विभिन्न चरणमा भएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण आजित बनेका जनता अब फेरि निषेधाज्ञा लागु हुँदा झनै समस्यामा परेका छन् । हजारौँले रोजगार गुमाएका छन् । हजारौँ घर जान नपाएर अलपत्र परेका छन् । कोही घरभित्रै थुनिएका छन् । कसैको आफन्त अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन् । यसोमा सबैमा मानसिक तनाव आउनु स्वाभाविक हो ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा खुसी रहन जोसुकैलाई सहज नहोला । तर मानसिक चिन्ताबाट छुटकारा पाउन, मनोचिकित्सकहरू जीवनमा नकारात्मक स्थितिहरू छन् भने, त्यसलाई स्वीकार्न अनुरोध गर्दछन् । यदि कसैले आफ्नो नकारात्मक तथा खराब समयलाई स्वीकार गर्न सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिको मानसिक तनाव डिप्रेसनमा परिणत हुन्छ।
तनावलाई कम गर्न कोसिस गर्नुहोस्
मनोचिकित्सक गीता सुवेदी जिएनएनलाई भन्छिन्, मानिसहरुले समस्याबाट भाग्नुको सट्टा समस्याको सामना गर्ने सिक्नुपर्छ । अहिले के भैराखेको छ, त्यहि सत्य हो । त्यसैले सत्यलाई स्विकार्न सुवेदी सुझाउँछिन् । गीता बताउँछिन्,”अहिले निषेधाज्ञामा सबैलाई मानसिक देखी आर्थिक तनाव छन् तर त्यसबाट बाहिर उम्कन हामीले बल गर्नुहुँदैन, ती समस्यासँग जुध्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा हाम्रो तनाव केहि मात्रामा कम हुन्छ ।”
सधैँ मलाई मात्रै यस्तो हुन्छ भन्ने भावना त्याग्न उनको सुझाव छ । हामीले वास्तविकता स्वीकार गर्नुपर्छ उनले भनिन् , “हामी अरूलाई देखाउन होइन आफ्नो सन्तुष्टिका लागी काम गर्नुपर्छ ।”
निषेधाज्ञाको यो समयमा घरमा बसेर भबिस्यका योजना बनाउन र जस्तो परिस्थिति भएपनि परिवारसंग रमाउन सल्लाह दिन्छिन् । ‘किनभने यो समय फर्केर आउँदैन, गीता बताउँछिन्, ‘त्यसैले यो लकडाउनमा जस्तो समस्या भएपनि त्यसलाई स्विकारेर खुसी रहन प्रयास गर्नुहोस् ।’
हर चिजको लागी आफुलाई दोष नदिनुहोस्
निषेधाज्ञा तपाइले गर्दा भएको होइन । त्यसैले यो बेला आउने हर समस्याको जिम्मेवार आफुलाई नबानाउन मनोचिकित्सक सल्लाह दिन्छन् । अरुसंग आफुलाई तुलना नगर्नुहोस् यसले पनि धेरै समस्या सुल्झाउँछ । कुनै काम गर्दा मनदेखी गर्नुस् जसले तपाईमा आत्मविश्वास बढाउँछ ।
सरकारविरुद्ध राप्रपाले सशक्त आन्दोलन गर्ने, यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम